> သီဟသူ [dot] blogspot [dot] com: October 2009
သီဟသူ [dot] blogspot [dot] com
#myanmar #poetry #naymyo
ဆိုတဲ့ ဒဿနတွေကလည်း အများသား...
ဒီသံသရာကလွတ်အောင် လမ်းပြနိုင်တယ်လို့တော့ ဖတ်ရတာပဲ...
ပြဿနာက လက်ရှိအချိန်ဟာ အဓိပ္ပါယ်မဲ့နေတာ...
သေချာတာတော့ ငါတစ်ယောက်ထဲ ဒါတွေတွေးမိနေတာမဟုတ်ဘူး..
အဓိပ္ပါယ်ရှိလောက်တယ်ထင်တဲ့ illusion တွေနောက်လိုက်နေရတာနဲ့ပဲ...
မှတ်ချက်။ ကျနော့်သူငယ်ချင်းတစ်ယောက် ပေးပို့လိုက်တဲ့ စာတစ်စောင်ပါ..
Posted by Thi Ha Thu at 7:01 PM
ဒါးတညံနှင့် အပေါင်းအပါများ မဟုတ်ပါ
(ရိုးရာ) ခြင်းလုံး ကစားနေကြတာ…
Posted by Thi Ha Thu at 5:14 PM
ဖန်လုံအိမ် အာနိသင် လျော့ချရေး၊ ကျိုတို ပရိုတိုကောလ်
နျူလက်နက်များ အပြီးတိုင် ဖျက်သိမ်းရေး၊
အကြမ်းဖက် ဝါဒ၊ မိစ္ဆာဝန်ရိုး နိုင်ငံများ
ငြိမ်းချမ်းရေး တစ်စက္ကန့်၊ တစ်မိနစ်၊ တစ်နာရီမှသည် တစ်ရက်
ဂလိုဘယ် ရီဆက်ရှင်း၊ ဒီပရက်ရှင်း
Posted by Thi Ha Thu at 5:13 PM
ဒါ ရွှေတိဂုံ ရာဟုထောင့်မှာလား
မာဆိုးကတော့ နေပူရှိန်ကြောင့် လူသတ်မိတယ်
(မိမိက) သူတစ်ပါးကို သတ်လိုက်လျှင် လူသတ်မှုဖြစ်၍ အသတ်ခံရသူသည် မိမိကိုယ်တိုင်ဖြစ်နေလျှင် ကိုယ့်ကိုကိုယ် သတ်သေမှုဖြစ်သည်။ *
ရင်ထဲမှာ အပူချိန် ရုတ်ချည်းတိုးလာ
ရေ ရေ ရေ ရေ
နေရာတကာ တံလျှပ်တွေ တလက်လက်
ဒီည ပါတီမှာ မင်းကြိုက်တဲ့ Bud ရှိမယ်တဲ့
ပါတီ တေးသံတွေ လေထုထဲမှာ
ရေအိုးကို ခွဲနေကြပြီ၊ ကြေးစည်ကို တီးနေကြပြီ
လူတွေ ဘယ်က ပြန်လာကြတာလဲ
ပါတီက ရှိကော ရှိရဲ့လား
သူမရဲ့ ရယ်သံလွင်လွင်လေး မဟုတ်လား…
* သစ္စာနီ၊ လေကိုရှူရှိုက်ခြင်း ဒုတိယပုံစံ၊ သရဖူ - အမှတ် (၂၃)
Posted by Thi Ha Thu at 5:08 PM
ကဂျိုးကဂျောင် ဟိုကောင်ဝတ်လာတဲ့ တီရှပ်ဟာ ငါ့အပြာရောင် တီရှပ်ပဲ။ တံဆိပ်နဲ့ စာတန်းနဲ့ [ စာတန်းက Boney’m ရဲ့ Solgan ကို ကူးရေးထားတာ ] Love For Sale တဲ့။ အသက်အရွယ်ကိုမှမထောက် မျက်နှာပြောင်ပြောင်နဲ့။
ဒီကောင် ပြီးခဲ့တဲ့ ၁၀ နှစ်မှာ မိတ်ဆွေတစ်ယောက် မတိုးဘူး။ တွဲနေကျထဲက သုံးယောက် ခွာသွားတယ်။ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်မှာ သူတစ်ယောက်တည်း။ ထိုင်ရင် ဒူးချိတ်တယ်။ ထရင် ခါးထောက်တယ်။ စိတ်ပါရင် ကဗျာရေးတယ်။ ခပ်တည်တည်ပဲ ကိုယ့်လူ။
ပေါ့သေးသေး မဟုတ်ဘူး။ ‘သူနဲ့တန်းတူတာ ကမ္ဘာမှာကို ရေ လိုက်ရင် လက်နှစ်ဖက် မပြည့်ဘူး’ လို့ အမြဲစဉ်းစားတယ်။ အချိန်ပြည့်ကို စဉ်းစားတာ။ ငါ သိတာပေါ့ကွာ။ အဲဒါ ရယ်စရာလိုလို၊ ငိုစရာလိုလို။
ဒါပေမယ့် သူ့မှာ အခိုင်အမာသူငယ်ချင်း၊ ရဲဘော်နှစ်ယောက်ရှိတယ်။ ကိုယ့် မိန်းမနဲ့ဆို သုံးယောက်ပေါ့။ ငွေယူသုံးတယ်။ ဆာရင် တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် စားတယ်။ ရန်ဖြစ်လို့ရတယ်။ အခြားသူတွေကို တစ်စက်မှ အထင်မကြီးဘဲ နေလို့ရတယ်။ ဟား လို့ရတယ်။ သနားလို့ရတယ်။ အနုပညာကို ကြီးကြီးချစ်ခဲ့တယ်။ ဟော…။ အခု ဟို ကဂျိုးကဂျောင်ကောင် လမ်းကူလာပြီ။ ငါ ရေးနေတဲ့ကဗျာကို လက်စသတ်မှ။
ငါတို့ တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် ကိုးကားလို့
‘ကော်တွန်နော်’ ‘ကြယ်သီး ၁၂ လုံးတပ်မယ်’
ပေကြိုးကို ပခုံးပေါ် ခွေတင်လိုက်တယ်။
ငါ့ကို ရွှင်ရွှင်ပြုံးပြုံး ကြည့်တယ်။
အင်း။ ကဗျာကောင်းလေးတစ်ပုဒ်လောက် ရချင်လို့
ဒီမနက် ကမ္ဘာကြီးကို နားထောင်အပြီး
ငါ ကမ္ဘာကြီးထဲ ခုန်အဆင်းမှာပေါ့
သွားတိုက်ရမယ် ! ။
အဲဒီမှာ . .
ငါ ဆတ်ခနဲ ကျင်စက်ထိသလို
ငါခုပဲ အဲဒီပြကွက်ကို ပြန်ကြည့်ရသလို အမှတ်ရရ
သူမရဲ့ ‘သွားတိုက်ပုံ’ သရုပ်ဆောင်ပြကွက်ကလေး။
သူမရဲ့ KAWABATA MAMIKO ဆိုတဲ့အမည်
I ama..worker တဲ့။
‘ဂျွန်လ၏ မိုးရေများ’.. မှ
အဲဒီလူတွေက ကျွန်တော်တို့ကို ရယ်စရာတွေ လုပ်ပြတယ်
ကျွန်တော်တို့က ရယ်ရမှာ အားနာတယ်
အားနာနာနဲ့ ကျွန်တော်တို့ ရယ်ပါတယ်
ရယ်ပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့ စိတ်ညစ်တယ်။
တစ်ဆိတ် ကျွန်တော်ပြောတာ ယုံစေချင်ပါတယ်
ကျွန်တော်တို့လည်း ပေါ့ပါးသွားအောင် တကယ်ရယ်ချင်ပါတယ်။
ဒါကြောင့်မို့ ငါဟာ ဒေဝဒတ်ဖြစ်ခဲ့ရ
ဒါကြောင့်မို့ ငါဟာ မာရ်နတ်ဖြစ်ခဲ့ရ
ဒါကြောင့်မို့ ငါဟာ ဦးကျောက်လုံးဖြစ်ခဲ့ရ
ဒါကြောင့်မို့ ငါဟာ အမေ့ အထင်လွဲ ခံခဲ့ရ။
ပြီး။ မိုးရာသီတွေ၊ ဆောင်းရာသီတွေ
ပြီး။ စာအုပ်တွေ၊ ဝတ္ထုတွေ
ရုပ်ရှင်ပဒေသာတွေ၊ ရှုမဝတွေ၊ သွေးသောက်တွေ
မြဝတီတွေ၊ ငွေတာရီတွေ၊ မိုးဝေတွေ။
ပြီး။ လက်ဖက်ရည်တွေ၊ အရက်တွေ
ဖိနပ်တွေ၊ ခြေသည်းလက်သည်း လှီးခုံလေးတွေ။
ပြီး။ ‘ငါ ဘယ်မှာလဲဟေ့’ ပြီး။ ‘ငါ ဘယ်မှာလဲဟေ့’
ဝါဇီ၊ ရွှေကြည်အေး၊ ရွှေလမင်း
အံကစားပွဲ ‘ရှုံးကြေးသင့်သူ’ လို
နေရသလိုပဲ ငါ့ အဖြစ်ဟာ
သူ့အောင်မြင်မှုနဲ့ ငါ့ကို နှုတ်ဆက်ရာ
သူ့ကိုယ်နံ့ ငါမကြိုက်လို့ ငါ မုန်းငတ်ခဲ့
အလျော အပျက် အကြား အစပ်များသဖြင့်
ငါတို့ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ဝေးခဲ့ကြ
ဒီနေ့ ဒီအချိန် ဒီနာရီ ဒီမိနစ်
ငါ စကားလုံးတွေ ရွေးလာတယ်
ရတုဘုရင်၏ ရတုများ ထစ်
ငါ့တို့ ထစ်, ထစ်
ထစ်, ထစ် ပြန်ဖတ်နေသလိုပဲ။
ပြောလို့ဖြစ်တာ ပြောနေရတဲ့ ကမ္ဘာကြီး။
ငါဟာ ဖီလိုဆိုဖာ မဟုတ်ပါဘူး
အသက် ၂၀ ကနေ
အသက် ၅ နှစ် ကြီးလာခဲ့တုန်းက
အသက် ၅၅ နှစ်ကနေ
အသက် ၅ နှစ် ကြီးလာတာကတော့
လက်ဖက်ရည် ၁၅၀၊ စီးကရက် (စီးကရက်၊ ဆေးလိပ်
သောက်ခြင်းဟာ ခေတ်မမီမှုပဲ) မသောက်
ဘတ်စ်ကားခ ၁၂၀၊ အရပ် ၅’ ၈”
ကိုယ်အလေးချိန် ၁၃၀ ပေါင်
ဆံစပ်မှဲ့ရှိ၊ အလုပ်အကိုင် ကဗျာဆရာ။
ငါဟာ ရုပ်ရှင်တွေထဲက သုံ့ပန်းနဲ့ တူလာတယ်။
(အခုတလောတော့ ဝလာတယ် ပြောတယ်)
ပြီးရင် ပြောမယ်၊ Game ဆော့မယ်။
တာဇံလား၊ ဂေါ့ဖားသားလား၊ ကဗျာဆရာလား၊
ဟဲ ဟဲ။ ကဗျာဆရာပါပဲ။
ငါ သောက်ခဲ့တာပေါ့ ကမ္ဘာကြီး။
မောင်သစ်မင်း ငယ်စဉ် အသည်းကွဲတုန်းက
လက်ဖက်ရည် တစ်ခွက် နှစ်ခွက် သုံးခွက် လေးခွက်နဲ့
ပူခဲ့တယ်။ ဆူခဲ့တယ်။ မုန်တိုင်းကျခဲ့တယ်။
လူဆိုတာ ကြုံရမှာပဲမို့ ကြုံခဲ့တယ်။
အပြစ်ကင်းတဲ့ လက်ဖက်ရည် တစ်ခွက် တစ်ခွက်
I Love Tea တဲ့
အဖေနဲ့အမေရဲ့ ဘဝမှာ ဇိမ်ခံမှုဟာ
ချိုင့်ဆွဲလက်ဖက်ရည် တစ်ခွက် ပိုသောက်တာပါပဲ။
ဒီမှာ လက်ဖက်ရည်နဲ့ မပြေပြီ အချစ်ကလေး။
အရင်က တစ်မိနစ် အတိုင်းသာ။
Next, Next ပဲ နှိပ်ကာ နှိပ်ကာ။
ကျွန်တော် ဒီနေ့အပန်းဖြေသီချင်းနားထောင်မှု အဆင်မပြေလှပါ။
မနက် ၂ နာရီမှာ ထ
မနက် ၂ နာရီမှာ ထ . . .
မနက် ၂ နာရီမှာ မထချင်လျှင်
မနက် ၂ နာရီမှာ ထ ။ ။
အလင်္ကာများ၊ ကဗျာပုလဲကုံးများ၊ ဖန်မီးအိမ်များ
လကွယ်ညများ၊ ဧရာဝတီမှ ဒုဌာဝတီများ
သို့မဟုတ် မီးချောင်းလို လင်းခဲ့၏။
[ မီးချောင်းဆိုလို့ အဲဒီခေတ်တုန်းက
ဖျပ်ဖျပ်၊ ဖျပ်ဖျပ်၊ ဖျပ်ဖျပ်
သတိရခြင်း မှတ်ဥာဏ်တွေလိုပါ။ ]
ငါတို့ခေတ်၏ ဂျွန်မိုးရေများ၊ သစ်ရွက်အသေများ
တစ်ကြောင်းမျှ၊ နှစ်ကြောင်းမျှ၊ ၁၄, ၅ ကြောင်းမျှ။
၁၀ ပုဒ်မျှ။ ၁၂ ပုဒ်မျှ။ ၂၅ ပုဒ်မျှ။
ကျွန်တော် နှစ် ၄၀ ကျော် ရေးခဲ့ရတာပဲ။
ခန္ဓာရုပ်နာမ် နှစ်ပါး အားသွန်
ဖတ်သူ၏ သဘောသကာယ မျှသာ ။ ။
‘အသည်းစွဲကဗျာဆရာ’ ပြီး၏ ။ ။
ဒန်တန့်ဒန် . . .
ရှုံးပွဲများအတွက် အမှတ်အသား (အမှာ)
ရယ်စရာပါ။ ငိုစရာလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ကဗျာပါ။ ကဗျာမဟုတ်ဘူးလို့လည်း ပြောနိုင်ပါတယ်။ ဘဝဖြစ်ချင် ဖြစ်မှာပေါ့။ ဖတ်ပါဦး။
မောင်ချောနွယ်က “ဘဝကို ဟာသဖြင့် မွမ်းမံသောအခါ အတော်အတန်ပျော်စရာကောင်းလာ၏” လို့ဆိုပါတယ်။ မကြားသေးမီလေးကပဲ သုခမိန်လှိုင်က “ထိပ်ပေါက် ခေါင်းကွဲ.. ဒဏ်ရာတွေဆို ရောင်စုံပတ်တီးလှလှ စည်းပြမယ်” တဲ့။ ကျွန်တော်ကြည့်ဖြစ်နေတဲ့ သီချင်းအချပ်က Bond မိန်းကလေးများတယောအဖွဲ့ ROYAL ALBERT HALL တင်ဆက်မှု ဖြစ်ပါတယ်။ “ပူလောင်မှု” ပါပြီး “ပူလောင်မှုပြေဆေး” လည်း တစ်ပြိုင်နက်တည်း ပါပါတယ်။ အနုပညာဟာအံ့သြစရာပဲ။ ရေငတ်ပြေခဲ့တယ်။
တစ်နှစ်ခွဲလောက် ကျွန်တော့် ခလုတ်ကသင်းဇာတ်ကို အရယ်အမောမပျက် တစ်လတစ်ပုဒ် မှန်မှန်ရေးနေခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော် ရယ်ပြနေခဲ့ပုံပါပဲ။
“အသည်းစွဲကဗျာဆရာ”ပေါ့။ စာဖတ်သူများလည်း ကျွန်တော်နဲ့ အတူရယ်ကြပါ။ ကျွန်တော့်ကိုဖြစ်ဖြစ် ရယ်ပါ။ အလကား ငေါင်နေမယ့်အတူတူ ရယ်နေတာ မကောင်းဘူးလား
တကယ်လို့ “အသည်းစွဲကဗျာဆရာ” ကို မှားပြီး “အသည်းကွဲ ကဗျာဆရာ”လို့ ဖတ်ရင်လည်း .. ရပါတယ်။ You Okay: Thank You.
၅ - ၉ - ၂၀၀၈
၂၀၀၅ ဇူလိုင်မှ ၂၀၀၆ နိုဝင်ဘာအထိ
‘သရဖူ’ မဂ္ဂဇင်းတွင် တစ်လချင်း
ကဗျာများဖြစ်ပါသည်။ ယင်းကို ‘စိတ်ကူးချိုချို’မှ
၂၀၀၈၊ ဒီဇင်ဘာ၊ ပထမအကြိမ်၊ စိတ်ကူးချိုချို။
Posted by Thi Ha Thu at 12:29 PM
စိတ်တစ်ခုဟာ တစ်ကြိမ်တည်းမှာ နှစ်ခါမညစ်နိုင်
(တော်ပါပြီ တစ်ကြိမ်မှာ တစ်ခါညစ်နဲ့တင် လုံလောက်ပါပြီ)
ဗျာ.. မကြားရဘူးခင်ဗျာ.. ဟယ်လို.. ဟယ်လို..
လေ လေ လေ
အငမ်းမရ ငါ ရှူသွင်းနေပုံ
မင်း ရောက်နေတဲ့ ဆက်သွယ်မှုဧရိယာပြင်ပမှာ လေထု သန့်စင်ပါရဲ့လား
ငါ ရောက်နေတဲ့ ဆက်သွယ်မှုကင်းမဲ့ဇုန်မှာတော့ လေထု ညစ်ညမ်းလှချည်ရဲ့
မြက်ခင်းစိမ်းစိမ်းကို မျက်စိထဲ မြင်လာ
ငယ်ရွယ်စဉ် ရှုရှိုက်ခဲ့ရသော လေပြေညင်းကို ပြန်ခံစားမိ
၁၉၊ ၁၀၊ ၀၉။
Posted by Thi Ha Thu at 11:23 AM
နေ၊ လ၊ ကြယ်
စသည်ဖြင့် ပေးရန် မရည်ရွယ်မိပါ
ငါ့ အပူနဲ့ငါ. . .
မသာလည်း တ၊ သာလည်း တ။
ငါ့ကို မင်းတို့ မမြင်နိုင်ကြ
ခု မြင်ရတဲ့ အလင်းရောင်ဟာ
လွန်ခဲ့တဲ့ အလင်းနှစ် သုံးသန်းက အလင်းရောင်မျှသာ. . .
Posted by Thi Ha Thu at 11:20 AM
လူတွေ ညစာ စားလိုက်ပြီးမှ
ရွှေရောင်တောက်နေတဲ့ နေ့ဟာ သတ္တုတုံးလို
ဓမ္မသီချင်းသံက မဆုံးနိုင်အောင် ရှည်လျားပျံ့လွှင့်လို့
အစီအစဉ်များ လှုပ်ရှားမှုများ ရှေ့ကို မဆက်နိုင်ဘဲရပ်တန့်လို့
နေမဝင်တဲ့နေ့ဟာ အိပ်မက်ကျမ်းအားလုံးကို ဖျက်သိမ်း
ညစာ မစားနိုင်သူတွေအတွက် စောင့်နေတာလား
နေမဝင်တဲ့နေ့ဟာ ညစာ မရှိသူတွေအတွက်
လမ်းမပေါ် လေးလေးတွဲ့တွဲ့ ထွက်လာကြတယ်
ဘယ်ကို သွားရမှန်းမသိပုံနဲ့ ယောင်ချာချာ ရပ်သူရပ်
ဘားတစ်ခုမှာ သစ်သားစည်ကြီးတွေ အားကိုးနဲ့
အသားကင်တဲ့ မီးဖိုက မီးခိုးခေါင်းတိုင်ကြီး
အသားကင်သမားက ပြီးခဲ့တဲ့ တနင်္ဂနွေက
သူ ကုတ်အင်္ကျီကြီးကို လှည့်လည်ရောင်းချလို့
နေမဝင်သောနေ့မှာ နေလုံးဟာ မီးလောင်စပြုပြီ
ငါတို့ချဉ်စရာ စပျစ်သီးတစ်လုံးတော့ ရပြန်ပဟေ့
ကျာပွတ်သမားတွေက နေကို လက်ညှိုးထိုးပြပြီး
ပိရမစ်ဆောက်ဖို့ ကျွန်တွေကို မနားတမ်းခိုင်းစေနေကြ
နေထဲမှာ ‘ကမ္ဘာကြီး ဘာဖြစ်ပါလိမ့်’ဆိုပြီး
အရူးတွေ နောက်တစ်ကြိမ် ကခုန်ဖို့ ထွက်လာကြ
လမ်းမတွေပေါ် တညည်းညည်း တညူညူ သွားနေဆဲ
ဘုရားသခင်ဟာ ကဖေးဆိုင်ထဲက ထလာပြီး
ဒီဘိလိယက်ကို ကျုပ်စဉ်းစားနေလို့။ ။
အရိုးစစ်ဆေးမှု၊ ၂၀၀၉၊ မေလ၊ ကျော်မွှေး
Posted by Thi Ha Thu at 11:42 AM
ငါ့နှလုံးသားထဲ ပျောက်ကွယ်သွားတဲ့ ‘မြို့တစ်မြို့’ကို
ဒီကနေ့ ပြန်ရှာတွေ့ခဲ့တယ်လို့ ကြွေးကြော်ခဲ့ခြင်းဟာ
အတိတ်က အရက်စည်နဲ့ ခေါင်းစည်းပဝါတွေ
ငါ့မြို့ထဲ ညစာစားပွဲများနဲ့ အလည်ခေါ်ချင်ပါရဲ့
ငါ့မြို့က လူကြီးလူကောင်းယဉ်ကျေးမှု တစ်စုံတစ်ရာ
အရေးပါပါ အခမ်းအနားဖွဲ့ ကဗျာရှည်ကြီးတွေလည်း
အဲဒီမြို့ထဲ နတ်ဆိုးနဲ့ ဝိုင်အရက်ဟာ
အဲဒီခေတ်က အတိုင်းပါပဲလို့၊ ငါက ဒီခေတ်ထဲမှာ
လက်တစ်ဖက်ကို ချွန်မြနေအောင် မြှောက်ရင်း
ငါကိုယ်တိုင်က အရုပ်စာများရဲ့ တစပြင်ထဲမှာ
ကိုယ့်ခေါ်သံကိုယ်မကြားရတဲ့ လဲလျောင်းမှု။ ။
Posted by Thi Ha Thu at 11:39 AM
ဆေးမြီးတိုနဲ့ ကုသချင်လို့ မဖြစ်ဘူး။
သတ္တဝါတိုင်းရရှိမယ့် အချိန်ပို လုပ်အားခပဲ။
‘ရွှေဂုံတိုင်’ မီးပွိုင့်နားမှာ ရှိခဲ့တယ်။
‘အဖော်’ကို ဟိုတယ်ပေါ်မှာ ဝေငှလို့
လူငယ်တွေ ကြယ်လို ကခုန်လို့
သင်နဲ့ နှစ်ဦးသဘောတူ ပွေ့ဖက်ပြီး
သင်နဲ့ နှစ်ဦးသဘောတူ အိပ်စက်ခဲ့ရတာ
အခုထိ မငြီးငွေ့နိုင်တာ ဘဝပေါ့
အနာဂတ်ကို မျှော်ပြီး တက်လိုက်တယ်။
ရုပ်ရှင်တေးကဗျာ၊ ဒီဇင်ဘာ၊ ၂၀၀၆
ကြေးစား၊ ၂၀၀၉၊ မတ်လ၊ Majestic publishing
Posted by Thi Ha Thu at 11:38 AM
ငါ့နာမည် စာလုံးပေါင်းကို မေ့လိုက်ပါ။
စိမ်းလန်းသော မနက်ဖြန်ဆီ အရောက်ပျံမယ့်
ရုပ်ရှင်တေးကဗျာ၊ ဇန်နဝါရီ၊ ၂၀၀၈
Posted by Thi Ha Thu at 11:37 AM
ကိုချောလာတယ် - ၂
ကိုယ့်လူရေ . . . ကိုယ်ပြန်လာပြီ
ချမ်းတယ် ကိုယ့်လူတွေရော O.K လား
ကိုယ်ကတော့ ဘာမှ မဟုတ်ခဲ့ပါဘူကွယ်
ဖြစ် မဖြစ်တော့ ကိုယ့်လူတွေပဲ ဆုံးဖြတ်ကြ
‘ညီမလေး မမမြင့်’ထဲမှာ ကိုယ့်ဘဝကြီး ဟက်တက်ပေါ့
ညီလေး သြဂတ်(စ်)လင်းလည်း မရှိဘူး
အမေက သားချင်းယှဉ်ခဲ့လို့သာ လုပ်ခဲ့တာ
ဇေယျာလင်းရေ . . . ကိုယ့်ကိုယုံကြည်တဲ့ ဇေယျာလင်းရေ
ကိုယ့်လမ်းပိုင် ကီလီကို သွားဦးမယ်
ညီမလေး မမမြင့်ကို ကြည့်ပေးပါ
ကိုယ်ဟာ သစ်စေးမဟုတ်ဘူး။ ။
ထင်ရှားသည့်အမှတ်အသား၊ ၂၀၀၆၊ မတ်လ၊ နှစ်ကာလများ။
Posted by Thi Ha Thu at 11:36 AM
စစချင်း မထင်ရှားတဲ့ အစရဲ့အစ
အစမှာ ထင်ရှားလာတာ ထင်ရှားလာတဲ့အစလား
ထင်ရှားမှုရဲ့ အစဟာ တစ်စတစ်စ
အစစအရာရာ ထင်ရှားစရာမရှိတဲ့ အစတစ်စ
ထင်ရှားစရာဆိုလို့ အစစအရာရာဟာ တစ်စပြီးတစ်စ
တစ်စပြီး တစ်စ အစစအရာရာဟာထင်ရှားစ စလာတယ်
ဘယ်အစဟာ အစရဲ့အစ စစချင်းလို မထင်ရှားတော့
အစ တစ်စမဟုတ်တစ်စဟာ မထင်မရှားစခဲ့ပြီ
မထင်မရှားနဲ့ တစ်စပြီးတစ်စ အစရှာတွေ့ခဲ့ပြီလား
စလာပြီပေါ့တစ်စ ပြီးတစ်စ ပြီးတစ်စ
စစရာအစတိုင်းဟာ တစ်စတစ်စ ထင်ရှားလာတော့တယ်
ထင်ရှားစရာတိုင်းဟာ တစ်စပြီးတစ်စ စစလာနေပြီ
တစ်စပြီးတစ်စ အစစအရာရာဟာ ထင်ရှားလာနေပြီ
အစရဲ့ အစကို ပြန်စရာမလိုတော့ဘူး
ဒါဟာ စလိုက်တဲ့အစပဲ။ ။
၁၁ ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၀၀၄
Posted by Thi Ha Thu at 11:35 AM
ငြိမ်းချမ်းရေး တစ်နေ့ / Peace One Day
“ ငြိ မ်းချ မ်းေ ရး”
ခုပဲ (ယူအက်စ် ဒေါ်လာ) ၃ဘီလီယံဖိုး “ကာကွယ်ရေးစနစ်နှင့် ပစ္စည်းကိရိယာများ”
Of course, everyone wants
“ P E A C E ”
Just got this eamil,3billions (u.s. dollar) worth of order
For various kinds of “Defence System and Equipment”.
We could chat
၁၆၊ ၁၀၊ ၀၉။
စက်တင်ဘာ ၂၁ အား ကမ္ဘာ့ငြိမ်းချမ်းရေးနေ့အဖြစ် ကုလမှ သတ်မှတ်ထား။
၃၆၅ရက်တွင် တစ်ရက်လောက် ငြိမ်းချမ်းရေးအရသာကို ခံစားကြည့်ဖို့ဖြစ်သည်။
Posted by Thi Ha Thu at 9:53 PM
ဆေးလည်းထိုးအပြီး (အဲ့ကောင်) ကြောင်သွားတယ်
မင့်ခံစားမှုက အတုပဲ၊ လန်ကြုပ်ပဲတဲ့
(ပြောတဲ့ကောင်က) ဖြတ် ညှပ် ကပ် သီချင်း/ကဗျာ/စာ ရေးတယ်
Posted by Thi Ha Thu at 9:51 PM
ဒီကွေ့မှာ ဒီတက်နဲ့ ဒီလိုလှော်၊ ဟိုကွေ့မှာ ဟိုတက်နဲ့ ဟိုလိုလှော်
ဒဏ်ကြေးကား ဆုံးစမဲ့ သံသရာဝဋ်ဒုက္ခ)
အေးချမ်းသာယာပြီး ခေတ်မီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သော နိုင်ငံတော်သစ်ဆီသို့
ချောမောစွာ ရောက်ရှိကြောင်း. . .
“ မစ္စတာ သီဟသူအား လောကဓံရှစ်ပါးမှ
အထူး (အထူး) ဝမ်းမြောက်စွာ ကြိုဆိုပါ၏။ ”
၁၅၊ ၁၀၊ ၀၉။
Posted by Thi Ha Thu at 2:09 PM
သူ့မိသားစု၏ ပြောကြားချက် -
“သူ နောက်ဆုံးအချိန်မှာ သက်သက်သာသာပါပဲ။
ကျွန်တော် ထပ်မံ မဖော်ပြတော့ပါ. . .
Posted by Thi Ha Thu at 2:07 PM
(ကြွက်မိမည်ဟု သေချာပေါက် အာမ မခံ)
နောက်ဘဝ၊ ဒီအချိန်၊ ဒီကစားပွဲမှာ ပြန်လည်ဆုံတွေ့ ရွေးချယ်ကြပါစို့…
Posted by Thi Ha Thu at 2:06 PM
အစွယ်ရှိတဲ့သူက အစွယ်အားကိုးနဲ့ ဂုဏ်မောက်တယ်
အဆိပ်ရှိတဲ့သူက အဆိပ်အားကိုးနဲ့ ဂုဏ်မောက်တယ်
ငွေရှိတဲ့သူက ငွေအားကိုးနဲ့ ဂုဏ်မောက်တယ်
အာဏာရှိတဲ့သူက အာဏာအားကိုးနဲ့ ဂုဏ်မောက်တယ်
ကဗျာလေး နှစ်ပုဒ်၊ သုံးပုဒ်နဲ့
၁၄၊ ၁၀၊ ၀၉။
Posted by Thi Ha Thu at 12:28 PM
ရန်ကုန်ဟာ မြို့ဖြစ်တယ်၊ မြို့တော်ဖြစ်တယ်
ရန်ကုန်ဟာ အန်စာတုံးပဲ… ဘုရားသခင် ကြွေအန်ကစားတယ်
မျက်မမြင် ပုဏ္ဏားတစ်ယောက်လို ရန်ကုန်ကို ငါ ထိစမ်းမိတယ်
ရန်ကုန်မှာ ရင်တုန်ရတယ်၊ ရင်ခုန်ရတယ်
ရန်ကုန်ဟာ ညစ်ပတ်ပေရေနေသလို၊ နှစ်သက်နေချင်စရာလည်း ဖြစ်နေတယ်
ရန်ကုန်မှာ လူငယ်ရှိတယ်၊ ကဗျာရှိတယ်
ရန်ကုန်မှာ အနုပညာရှိတယ်၊ ခံစားမှုရှိတယ်
ရန်ကုန်ဟာ ငရဲဖြစ်သလို၊ နိဗ္ဗာန်လည်းဖြစ်တယ်
ကမ္ဘာတစ်ခြမ်း မှောင်နေချိန် ကျန်တစ်ခြမ်း လင်းသလို၊ ရန်ကုန်ဟာ ကမ္ဘာကြီးဖြစ်တယ်
ရန်ကုန်မှာ မညီမျှမှုတွေရှိတယ်၊ မကြည်သာမှုတွေရှိတယ်
ဒါတွေဟာ ငါ့ရဲ့ ထိစမ်းမိမှုများသာဖြစ်တယ်၊ အန်စာတုံးရဲ့ မျက်နှာတစ်ဖက်မျှသာဖြစ်တယ်
၁၃၊ ၁၀၊ ၀၉။
Posted by Thi Ha Thu at 2:36 PM
တွေ့ကြမယ်လေ၊ နောင် ပြန်တွေ့ကြရင်ပေါ့
ခင်ဗျားလည်း ခင်ဗျားလမ်းနဲ့ ခင်ဗျား
ကျွန်တော်လည်း ကျွန်တော့်လမ်းနဲ့ ကျွန်တော်
တစ်ခုခုပြောပြီးတိုင်း ဒါပေမဲ့နဲ့ အဆုံးသတ်ရတယ်
တစ်မြို့တည်းမှာ တစ်ကမ္ဘာစာ ဝေးနေကြတယ်
စာအုပ်တွေ၊ စာရေးသူတွေအကြောင်း ပြောကြဖို့
နောင် ပြန်တွေ့ကြရင်ပေါ့. . .
Posted by Thi Ha Thu at 2:33 PM
I’veablog,
Of course, on Blogger.com.
I’ve got so many hits, visits.
Nearly millions of trillion.
Of course, I’ve so many followers.
I’veaFaceBook Fan page.
I’ve so many fans too.
I am, one of
The millions of trillion
Of your blog readers, visitors,
And FaceBook Fans.
Thi Ha Thu
Posted by Thi Ha Thu at 10:58 PM
ဒိုးလုံး အရိုးထိအောင် ရူးနေတယ်
ငါက စိမ်းတဲ့ ကဗျာတွေနဲ့ လုံးပမ်းနေတယ်
လမ်းထိပ် ဆိုက်ကားဂ်ိတ်ဘေးက ဇယ်ခုံလောက်တောင် အားပေးမှုမရ
အားလုံးအားပေးတာက အီး၊ ပီ၊ အယ်လ် ပွဲစဉ်များ
အားလုံးဆဲတာက အမ်၊ အန်၊ အယ်လ် ပွဲစဉ်များ
ကိစ္စက သေမလား၊ နေမလား ချိန်းဆိုမှု
ညနေက သူငယ်ချင်းတစ်ကောင် စော်နဲ့ ပြတ်သွားတယ်
ညနေက သူငယ်ချင်းတစ်ကောင် ကစော် ပြတ်သွားတယ်
ဆင်ဆာ ဆင်ဆာ အော်တဲ့ သူငယ်ချင်းစာရေးဆရာတစ်ယောက်ရှိတယ်
ထင်တာ ထင်တာ အားလုံးဟုတ်ယောင်မှုတဲ့ သူငယ်ချင်း တရားဟောဆရာ တစ်ယောက်ရှိတယ်
ညမှာ အပြစ်/အဖြစ် ရှိသူ
ညမှာ အချစ်/အခြစ် တွေနဲ့လူ
ညမှာ စိတ်ဓာတ်ကျတဲ့သူ/ စိတ်တက်ကြွတဲ့သူ
ညမှာ အိပ်မရသူ/ မအိပ်ရသူ
သန်းခေါင်ကျော်ရင် အာရုဏ်ကို ဆိုပေမယ့်
၁၀၊ ၁၀၊ ၀၉။
Posted by Thi Ha Thu at 12:16 PM
မဝငျးမေ (နမြေိုး) #naymyo
ကြယ်ငေးသူ #၁၃ (2)
ဆောင်းဝေ (နတ်မောက်) (1)
ဒေါက်တာ သန်းထွန်း (1)
နိုင်ဝင်းမိုရ် (တလုပ်မြို့) (1)